9 zvinhu zvekuita mushure mekuisa Ubuntu 18.04 | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji vashandisi veGnu / Linux vanotanga kana kushandisa iyo Ubuntu kugovera. Kugoverwa uku kwakanakira vashandisi ve novice uye mazhinji maLTS shanduro. Vhiki rino Ubuntu LTS yakagadziridzwa pamwe nekuburitswa kweUbuntu 18.04. Izvi takatotaura nezvazvo pano uye isu takatokuudzai maitiro ekuisa Kubuntu 18.04. Asi nhasi tichakuudza zvekuita mushure mekuisa Ubuntu 18.04, iyo post-gadza runhare.
1 1. Gadziridza Ubuntu neazvino
2 2 Isa macodecs achangoburwa
3 3.Inable iyo yekudzikisa bhatani.
4 4. Kuiswa kweTweaks.
5 5. Enable usiku muoti pakombuta
6 6. Isa iyo nyowani Ubuntu 18.04 Nharaunda theme
7 7. Kuiswa kweSuplementary Software
8 8. Kuisa zvinowedzera muGnome
9 Pane chimwe chinhu?
1. Gadziridza Ubuntu neazvino
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuve nechokwadi chekuti yedu system iri yazvino neyakagadziridzwa, kuti hapana kana chinhu sezvo isu takanyora iyo ISO mufananidzo kusvika zuva rekumisikidzwa. Kune izvo isu tinovhura terminal uye tinonyora zvinotevera:
2 Isa macodecs achangoburwa
Nhanho inotevera yatinofanira kuita ndeye gadza macodec uye mamwe multimedia uye web plugins zvekuparadzira, yeizvi isu tinovhura terminal uye tinonyora zvinotevera:
3.Inable iyo yekudzikisa bhatani.
Iyo nyowani Ubuntu desktop hazviwanzo kuunza bhatani rakadzikiswa nekutadzaKuti tikwanise, isu tinongofanirwa kunyora nekuita zvinotevera mune terminal:
4. Kuiswa kweTweaks.
Kuita kwako uye manejimendi kwakakosha kwazvo, ndosaka tichizoda gadza Gnome Tweaks kana maTweaks, yeizvi isu tinonyora zvinotevera mune terminal:
5. Enable usiku muoti pakombuta
Ubuntu 18.04 inounza nekushandiswa kweiyo husiku modhi, ndiko kuti, mukana we shandisa komputa Monitor isina bhuruu mwenje. Icho chinhu chinoshanda uye chinobatsira, kumisikidza kwayo kunogona kuitwa nekuenda kuZvirongwa -> Midziyo -> Screen.
6. Isa iyo nyowani Ubuntu 18.04 Nharaunda theme
Ubuntu 18.04 yaitarisirwa kuve new desktop theme, asi pakupedzisira haina. Zvisinei, inogona kuiswa nekutaipa "communitheme" muUbuntu Software Center package yekuwana. Kana tangoisa shanduko tinodzitangazve uye tichava neweti yedesktop theme inoshandiswa.
7. Kuiswa kweSuplementary Software
Zvino zvatiri mukati Isu tinoshandisa iyo Ubuntu Software Center kumisikidza mamwe mapurogiramu atinoda. Uku kumisikidza kuchaitwa kuburikidza nekukurumidza mapakeji. VLC, Spotify kana Skype zvingave zvakanaka kunyorera kutanga kushandisa iyo nyowani Software Center.
8. Kuisa zvinowedzera muGnome
Kuwedzera kweGnome kuchazodiwa zvakare mukuburitsa uku. Kutevera bhuku racho iyo yatakaburitsa kare kare, iwe uchaona zvinogona kuitwa neiri nyowani yeGnome basa.
Pane chimwe chinhu?
Matanho aya ndiwo akakosha asi haasi iwo ega. Zvichienderana nerudzi rwemushandisi isu tiri, tinogona kuisa zvimwe software kana zvishoma, mamwe masisitimu kana mashoma. Izvo zvinoenderana neumwe neumwe, asi izvi ndizvo zvakakosha Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » 9 zvinhu zvekuita mushure mekuisa Ubuntu 18.04
Manuel Ardoy akadaro
Musi waAugust 15, 2018 ini ndakaisa iyo yekuvandudza kune ubuntu 18. Ubuntu 16 yainge ichifamba zvakanaka, pasina matambudziko ... asi kubva pazuva regumi neshanu, ndichingoshandisa firefox kuona iyo yekudhinda kana elgún vhidhiyo paYouTube ... ubuntu unoparara zvachose .. dzimwe nguva inozvitangisazve. Ini handina kukwanisa kuve neUbuntu pane inopfuura hafu yeawa.
Ndakaedza kubhoot neiyo windows 7 partition uye pakave pasina dambudziko.
Chinhu ndechekuti, mune zvazvino mamiriro ezvinhu ... Ini handigone kushandisa ubuntu.
Pindura manuel ardoy
zvakanaka, ndine mubvunzo wandisingazive kana zvingave zvakakodzera kupindura pano, asi zvine hukama nechinyorwa.
Ini ndichangoisa ubuntu 18, uye inoenda zvakakwana mushure mekuisa zvese zvidzoreso uye akati wandei zvirongwa, mubvunzo ndewokuti kana paine sarudzo mu ubuntu kukwanisa kugadzira iso inobhururuka nehurongwa sezvandinazvo izvozvi, ndiko kuti, yakagadziridzwa uye nemapurogiramu akaiswa ayo andisingade kudzoreredza kana ndichifanira kudzoreredza OS ... ita rudzi rwekuwanazve asi tsika ... ndinofunga cubic inozviita, asi ini handizive kana ichingogadzirisa chete iso yeiyo OS kana zvakare inobvumidza kugadzira iyo iso kune yako kuravira kwekuisirwa ...
Ndatenda pamberi pemhinduro
Hi Aso: Pane chishandiso chinonzi Pinguy Builder, icho chinoita chaizvo zvaunoda. Unogona kutsvaga zvidzidzo paYouube.
Manuel Hdez akadaro
Ini ndaisa ubuntu 18.04 pane dell inspiron AMD® A9-9400 radeon r5 laptop, 5 compute cores 2c + 3g × 2, llvmpipe (LLVM 6.0, 128 bit), 64 bit
Zvese zvinhu zvakanaka sezviri pachena, asi kana uchiedza kuratidza kujekesa nekushandisa vhidhiyo projekita, haizvizive kana iwo monitors basa kuoneka richishanda muchikamu chekumisikidza.
Inogona kubatsira padambudziko iri.
Pindura kuna Manuel Hdez